Garsoor Xumada Dalka Ka Jirta | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Garsoor Xumada Dalka Ka Jirta
Garsoor Xumada Dalka Ka Jirta
Maalin kahor wuxuu weriye ka tirsan Xaqiiqa Times kula kulmay magaalada Muqdisho haweeney Soomaali ah oo kasoo jeedda qoys sabool ah oo ka cabaneysa cadaallad darro ay ka tabaneyso Garsoorka iyo Maxkamadaha Soomaaliya, waxayna la wadaagtay sheekadan:
“Waxaa 1998 afduub loo geystay walaalkay Maxamed Aadan. Maalmo markii la haystay ayaa naloo sheegay in uu xorriyadiisu dib u heli doono haddii aan bixinno lacag 3 milyan oo shilin Soomaali ah. Hooyadey oo xilligaa nooleyd ayaa u tagtay nin dariskeenna ahaa. Waxay ku heshiiyeen in lacagta wiilka loo haysto nalaga bixiyo, beddelkeedana uu damaanad u haysto warqaddii lahaanshaha gurigeenna. Hooyo way aqbashay waxayna ii sheegtay inaan sabarloogada soo bixiyo oo u geeyo ninkii dariskeenna ahaa kaddibna aan kasoo qaado 3da milyan. Aniga ayaa dukumentigii kuw areejiyay lacagtiina kasoo qaaday. Muddo kadib ninkii daynta nasiiyay gabar ay walaalo yihiin ayaa dacwad nooga furtay Maxkamadda Gobolka Banaadir, iyadoo leh gurigan nus boos ka mid ah ayuu walaalkey iigu iibiyay 3 milyan. Waxay soo sameysatay warqado been-abuur ah. Dacwaddii waan kaga adkaannay. Kaddib Maxkamadda Gobolka ayay u gudbeen waan kaga guuleysannay. Waxay haddana tageen Maxkamadda Sare annaga ayaa naloo xukumay. Halkii laga rabay inay racfaan qaataan ayay dib ugu noqdeen Maxkamadda Gobolka oo uu qaadigii annaga noo xukumay dib uga laabtay xukunkii hore. Waxa ay iska daba wareegtaba ugu dambeyn waxaa la qaatay nus boos aan annagu leenahay oo caddaalad-darro nalooga goostay maadaama aanan haysan hanti iyo hub aan isku difaacno. Dacwadahan dhulka nalooga boobay waxa ay billowdeen 2007, iyagoo socday ilaa 2012. Wixii ka dambeeyay meesha aan tagnaba jeeb iyo laaluush ayaa nalooga taag roonaaday.
Waxaan codsaneynaa ciddii ay Islaamnimo ku jirto inay noo soo gurmato oo hantida xoogga nalooga heysto wax laga qabto maadaama uusan jirin garsoor caddaalad ku dhaqma oo hantideenna noo soo celin kara.”
Haweeneyda noo sheegtay arrintan iyo qoyska ay ka sheeganayso intaba maanan xusin magacyadooda sababo la xiriira in aanan xaqiijin karin sax ahaanshaha xogta nala siiyay oo u baahan dabagal dheeraad ah.
Sidaa daraadeed Maamulka iyo Tifaftirayaasha Xaqiiqa Times waxa ay go’aamiyeen in qormo ka hadleysa cadaallad-darrada ay isu geystaan dadkeena lagu soo bandhigo cadad walba. Waxaana isku dayi doonnaa inaan dhageysanno eedeymaha labada dhinac annaga oo si siman uga hadli doonna si akhristayaasha laftooda ay go’aan uga gaaraan marka ay akhristaan xog isu dheelli tiran.
Annaga oo og in ka hadalka cadaallad-darra guud ee dalka ka jirta uu wato khatarihiisa, haddana in laga aamuso ayaa ka dhigan in dhibaatooyinka iyo burburka dalka oo salka ku haya cadaallad-darro uu sii daba dheeraado. Waxaan codsaneynaa qofkii ay ku dhacday sheekooyin noocan oo kale ah ama si guud cadaallad-darro u tabanaya oo aan fileyno inay tahay wax guri walba oo Soomaaliya ku yaalla raadad ku reebay inay nagala soo xiriiraa email kan:
Previous articleAskari yaad hubka u sidataa?
Next articleSooyaalkii Dr. Xuseen Kaddare iyo Doorkiisii Dhaqanka iyo Afka Hooyo